Leuprorelin Acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏အဓိကသတင်းအချက်အလက်၊
1. leuprorelin acetate ကဘာလဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Lupron ကိုအူမင်ဒီယိုဂျီရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုသည်။ Leuprolide acetate နှင့်ကိုယ် ၀ န်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဓိကပြisနာဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကလေးမွေးရန်မျှော်လင့်ထားသော်လည်း၎င်းကိုသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ Lupron သည် ၁-၆ လတိုင်းကြွက်သားထဲသို့ထိုးသွင်းသင့်သောထိုးဆေးဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ထံမှသောက်သုံးသောဆေးကိုသောက်ရန်အမြဲတမ်းသေချာပါစေ၊ သို့သော်သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သောသောက်သုံးသောဆေးကိုအလွယ်တကူသောက်သုံးရန်မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ထိုးသွင်းရမည်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်။
Leuprolide acetate ၀ ယ်ခြင်းကိုအွန်လိုင်းနှင့်ဆေးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ leuprolide acetate ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်သည်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ဆေးပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှမှန်ကန်သောဆေးညွှန်းကိုအမြဲတမ်းရယူရန်အကြံပြုလိုသည်။ leuprorelin acetate အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသတိရပါ၊ ဆေးကုသမှုခံယူစရာမလိုဘဲ၎င်းကိုမသောက်သင့်ပါ။ ကင်ဆာရောဂါသည်ပြင်းထန်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်၎င်းကိုသင်၏ဆေးဝါးများကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မသောက်သင့်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်ဆွေးနွေးပါ leuprorelin acetate အမှုန့် သောက်သုံးသော။
2. Leuprolide acetate လျှောက်လွှာ
အဆိုပါ leuprorelin acetate သောက်သုံးသော ကြွက်သားများမှတဆင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထိုးသွင်းသင့်သည်။ သင့်သောက်သုံးသောပမာဏကိုစီမံရန် U-100 အင်ဆူလင်ဆေးထိုးကိုသုံးပါ။ ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောပြွတ်များကိုသင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မတူညီသောဆေးထိုးအပ်ကိုသုံးရမည်။ ထို့နောက် 0.5-mL တစ်ကြိမ်တည်းသာသုံးနိုင်သည်။ မသုံးစွဲမီထုတ်လုပ်သူကဖော်ပြသည့်အတိုင်း leuprorelin acetate အမှုန့်ကိုရောစပ်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။ ဖြေရှင်းချက်ကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းကသင့်အားလုံလောက်သောရောနှောခြင်းမဖြစ်စေနိုင်ပေ။ Leuprolide ထိတွေ့မှုကသင့်ကိုသင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့ကိုသင့်ဆရာဝန်ထံမှအမြဲတမ်းရယူပါ။
3. ဘယ်လို leuprolide acetate အလုပ်လုပ်သလဲ
Leuprorelin acetate ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကုသမှုအောက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသရာတွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသော testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Leuprorelin Acetate အမှုန့်ပေမယ့် (74381-53-6) အသုံးပြုခြင်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုပျောက်ကင်းစေသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိကင်ဆာဆဲလ်များ၏နာကျင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းဆေးကိုတစ် ဦး တည်းသောက်သုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်ရလဒ်ကောင်းများအတွက်အခြားဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆေးများနှင့်အတူသောက်ရန်သင်ဆေးများကအကြံပြုသည်။
အချို့သောနိုင်ငံများရှိအမျိုးသမီးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအတည်ပြုရန်ခွင့်မပြုသော်လည်း၎င်းသည် endometriosis ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ဤတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအီစထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤတွင် Leuprorelin acetate ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သင်၏ကာလအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောအီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းကိုလျှော့ချရန်အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ သင် leuprorelin acetate သောက်သုံးသောပမာဏကိုစတင်စတင်သောအခါ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအက်စထရိုဂျင်ပမာဏသည်မြင့်တက်လာပြီးနောက်အက်စထရိုဂျင်အဆင့်များကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏ကာလကိုခေတ္တရပ်တန့်စေပြီးရလဒ်အနေဖြင့် endometriosis လက္ခဏာများကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။
Leuprorelin acetate ရင်သားကင်ဆာသည်အမျိုးသမီးများအတွက်သေစေနိုင်သောရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ကူညီသည်။ ပရိုဂျက်စတာရွန်နှင့်အက်စထရိုဂျင်တို့သည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်သော်လည်း ၄ င်းတို့၏ကြီးထွားမှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုကူညီရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီဟော်မုန်းနှစ်မျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုသားဥအိမ်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊
pituitary gland မှထုတ်လုပ်သော luteinizing hormone သည်သားဥအိမ်ကပရိုဂျက်တာနှင့်အီစထိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအစပျိုးသည်။ leuprorelin acetate အသုံးပြုခြင်းက luteinizing hormone ထုတ်လုပ်မှုကိုနှိမ်နင်းပေးပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ estrogen နှင့် progesterone ပမာဏကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကင်ဆာဆဲလ်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းနှေးကွေးသွားပြီးရင်သားကင်ဆာကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
၄။ leuprorelin acetate ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
leuprorelin acetate ကိုတိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်း (သို့) ဆေးညွှန်းကိုမသောက်သုံးမီအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအမှုန့်နှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်လေ့ကျင့်ပေးသောအခါအိမ်၌သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
Leuprorelin acetate ဆေးထိုး ကြာရှည်စွာပြုမူသောဆေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အသားကိုထိုးသွင်းပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး မှစီမံသင့်သည်။ သင်၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ထိုးဆေးကိုတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် ၃၊ ၄၊ ၆ လတိုင်းတစ်ကြိမ်ပင်ပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, leuprorelin acetate ဆေးထိုးကိုတခါတရံတွင် ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆ လတိုင်းသင့်ကြွက်သားများသို့ထိုးသွင်းသည့် (Eligard) ဟုလူသိများသောကြာရှည်သောဆိုင်းထိန်းစနစ်အဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးစစ်ပြီးတဲ့အခါသင့်ဆရာဝန်ကသင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးပြီးအကောင်းဆုံး peptide အမှုန့်ကိုသောက်ရန်ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ သင်၏သောက်သုံးမှုသံသရာကြာမည့်အချိန်ကိုသင်၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်သင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးထိုးခြင်းသည်လူနာတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမတူကွဲပြားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသောအစွမ်းထက်သည့်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည့် leuprorelin အမှုန့်ကိုတစ်ခါတစ်ရံသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော် Leuprorelin acetate အမှုန့်ကိုသင့်ကြွက်သားများထဲသို့မထည့်မီကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရမည်။ အမှုန့်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပြီးသင်ကညစ်ညမ်းသောဆေးထိုးပြရန်မလိုအပ်ပါ။ leuprorelin acetate ကိုပြင်ဆင်သည့်အခါမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူမှပေးသောအရည်ကိုသုံးပါ။ အဖြူရောင် planer ကိုအလှည့်မကျမချင်းအဆို့တွင်ဒြပ်ထုကိုသင်ဖြောင့်အောင်ကိုင်ထားပါ။ ယခုပလောင်ဂွမ်းကို ၈ စက္ကန့်လောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းထုတ်ခြင်းဖြင့်ပျော်ရည်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ ပထမဆုံး topper သည်အပြာရောင်လိုင်းကိုစည်၏အလယ်တွင်ရောက်လိမ့်မည်။ ဤတစ်လျှောက်လုံးတွင်ထိုဆေးထိုးပြွန်ကိုဖြောင့်မတ်စွာထားပါ။
5. Leuprorelin acetate သောက်သုံးသောနှင့် leuprorelin acetate အုပ်ချုပ်ရေး
Leuprorelin acetate ဆေးသည်ထိုးဆေးသာလျှင်သာဖြစ်ပြီးရလဒ်ကောင်းများအတွက်ဆရာဝန်ဆီမှသင့်သောက်သုံးမှုကိုအမြဲသောက်သုံးသင့်သည်။ သင်၌ဤ peptide အမှုန့်ဖြင့်ကုသနိုင်သောအခြေအနေရှိသည်ဟုသံသယရှိလျှင်ဆေးစစ်ချက်မခံယူဘဲ၎င်းကိုမဝယ်ယူပါနှင့်။ Leuprolide acetate ထုတ်လုပ်သူများ အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်များပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးသောက်သုံးသောညွှန်ပြနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးမရှိပေ။
endometriosis လူနာများအတွက်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏမှာ ၃.၇၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး ၆ လခန့်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ထိုးသင့်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်က ၁၁.၂၅ မီလီဂရမ်ကိုအကြံပြုနိုင်သည့်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ၎င်းကိုသင်သုံးလတစ်ကြိမ်ထိုးသင့်သည်။ endometriosis အတွက် leuprorelin သောက်နေသည့်အမျိုးသမီးများသည် vasomotor လက္ခဏာများနှင့်အရိုးတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆများလျှော့ချရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးကိုသွားရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများရွေးချယ်ရာတွင်ကုထုံးတစ်ခုစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုချိန်ဆတွက်ချက်ခြင်းကို ဦး စားပေးသင့်သည်။
သတိရပါ၊ သင်၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက် Leuprorelin သောက်သုံးရန်သင့်ဆရာဝန်သည်မှန်ကန်သောလူဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင့်ခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုကိုလေ့လာပြီးနောက်အချိန်နှင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အနိမ့်ဆေးများဖြင့်စတင်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ Leuprolide acetate နှင့်ကိုယ် ၀ န်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ဆေးသည်မမွေးသေးသောကလေးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်ဤ peptide အမှုန့်ကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင်သို့မဟုတ်မကြာမီကိုယ်ဝန်ရရန်စီစဉ်နေချိန်တွင်မသောက်ရန်အကြံပေးပါသည်။
6. Leuprorelin acetate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
ကိစ္စများစွာတွင်၊ သင်သည်မည်သည့်ဆေးကိုမဆိုအလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲလျှင်၎င်းသည်သင့်အားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏ခွန်အားသည်တစ်ခါတစ်ရံသက်ရောက်မှု၏ပြင်းထန်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ leuprorelin acetate သောက်နေစဉ်သင်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကအလားတူဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ Leuprolide သတိပေးချက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်းခံမှုစသည့်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့အသုံးပြုသူများသည် leuprolide နှင့်ထိတွေ့မှုနည်းသော်လည်းသောက်သုံးသူများအနေဖြင့်မြင့်မားစွာသောက်သုံးသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများခံစားနိုင်သော်လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ဆေးပညာလောက၌မှန်ကန်စွာအသုံးပြုသောအခါ leuprorelin acetate သည်အလွန်ကြီးစွာသောဆေးဖြစ်သည်ဟုသက်သေပြခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, leuprolide acetate ဝယ်သင့်ရဲ့အနီးဆုံးဆေးဆိုင်မှာရရှိနိုင်ပါသည်, သင်သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင် leuprolide acetate ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအများအပြားရှိသော်လည်းအရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်များကိုသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိရန်သင့်သုတေသနကိုအမြဲတမ်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ The leuprorelin acetate စျေးနှုန်း ရောင်းချသူတစ် ဦး နှင့်ကွာခြားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်မူးယစ်ဆေး ၀ ယ်ခြင်းမပြုမီသင့်လျော်သောသုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင့်ဆရာ ၀ န်ထံမှမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆေးမမှီမီ leuprorelin acetate ရင်သားကင်ဆာကိုမသောက်ပါနှင့်။
သီချင်း, G. အ, Gao, အိပ်ချ်, & Yuan, Z. (2013) ။ ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူ premenopausal လူနာ cyclophosphamide-doxorubicin-based ဓာတုကုထုံးပြီးနောက်သားအိမ် function ကိုအပေါ် leuprolide acetate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်အဆင့် II ကျပန်းစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်တွေကို။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်ဆာပညာရပ်, 30(3), 667 ။
Köhler, G. အ, Faustmann, TA, Gerlinger, C, Seitz, C, & Mueck, AO (2010) ။ endometriosis များအတွက်နေ့စဉ်, 1,2နှင့် dienogest ၏4မီလီဂရမ်၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ် ဦး ဆေးထိုး - အထိလေ့လာမှု။ မီးယပ်နှင့်သားဖွား၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 108(1), 21-25 ။
Tunn, UW, Gruca,,, & Bacher, P. (2013) ။ အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်ခြောက်လ leuprorelin acetate သိုလှောင်မှုရေးဆွဲရေး: လက်တွေ့အကဲဖြတ်။ အိုမင်းအတွက်လက်တွေ့ကြားဝင်, 8, 457 ။
ဂျွန်ဆင်, SR, Nolan, RC, Grant, MT, စျေး, GJ, Siafarikas, အေ, Bint, L. , & Choong, CS (2012) ။ ဗဟို precocious အပျိုဖော်ဝင်ဘို့ depot leuprorelin acetate ကုထုံးနှင့်ဆက်စပ်မြုံအိုင်းနာဖွဲ့စည်းခြင်း။ ကလေးအထူးကုနှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 48(3), E136-E139 ။